Isebenza kanjani i-Task Manager ku-Chrome | Izindaba zamagajethi
Uyazi ukuthi i- "Task Manager" isebenza kanjani? Ngokumane usho le nkulumo yamagama amathathu, abantu abaningi bangayihlonza ngohlelo lokusebenza lwe-Windows, njengoba ingenye yemisebenzi esetshenziswa kakhulu lapho uhlelo lwethu lokusebenza lusengozini.
Okungenziwa abantu abaningi, ukuthi le Windows Task Manager efanayo (noma ikhophi yayo) Futhi ikhona kusiphequluli seGoogle Chrome. Uma ucabanga ubukhulu iGoogle efuna ukuya kusiphequluli sayo nohlelo olusebenzayo kufayela le- Chromebook, akufanele kusimangaze ukuthi lo msebenzi ofanayo ukhona endaweni eshiwo ngoba ngalokhu, sizoba nethuba lokulungisa izinkinga ezimbalwa ezingase zivele noma yinini.
1 Yini i-Task Manager kuGoogle Chrome?
2 Izinzuzo ze-Task Manager ku-Google Chrome
Yini i-Task Manager kuGoogle Chrome?
Uma usebenzise le Task Manager ku-Windows, imininingwane esizokunikeza yona ngokulandelayo ngeke kube nzima ukuyiqonda ngasohlangothini lwakho, noma, uma sizothatha isikhathi ukuzama ukuchaza ububanzi balesi sici ku-Google Chrome, konke ngesibonelo esincane esizokhuluma ngaso (njenge-hypothesis elula) ngezansi.
Ake sithi okwesikhashana usebenza ne-Google Chrome nenombolo ethile yamathebhu, lapho kunemininingwane eyahlukahlukene ephathelene "nabangane bakho". Kungaba nesikhathi lapho amanye ala mathebhu awaqedi ukulayisha yonke imininingwane, into ongayibona kuphawu oluncane lwe-animated (isiyingi) esivame ukuvela ngasohlangothini lwesobunxele lwethebhu, okuvele kube yinto efanayo "nomthwalo wekhasi". Uma lolu phawu luhlala isikhathi eside ulwazi olukuleli khasi lewebhu alukaqedi ukulayisha ngokuphelele. Kungenzeka futhi ukuthi i- "X" encane esisiza ukuvala ithebhu ye-Google Chrome ayisebenzi, ngakho-ke kumele izame ukusebenzisa iWindows Task Manager ukuphoqa ukuvala sonke isiphequluli.
Ngaphandle kokuthi usebenzise lesi sici sokugcina ku-Windows, umuntu angakwazi yenza kusebenze i-Google Chrome Task Manager usebenzisa kalula uhlelo olulandelayo:
Iya kusithonjana se-hamburger (imigqa emithathu evundlile) ohlangothini olungakwesokudla.
Kusuka kuzinketho ezibonisiwe khetha leyo ethi «Amathuluzi amaningi".
Manje khetha inketho «Umphathi Womsebenzi".
Ngokushesha uzobona ukuthi iwindi le-pop-up livela ngaleso sikhathi, okuyindlela encishisiwe yalokho ongase ukubone kwiWindows Task Manager; njengakwimvelo yokugcina, lapha uzokwazi nokubona ubukhona balawo mathebhu (nama-plugins) asebenzayo. Kuphela kufanele ukhethe ithebhu edala inkinga yokulayisha noma ukuvala futhi kamuva, inketho engxenyeni engezansi engakwesokudla (yaleli windi elifanayo) ku- «inqubo yokugcina» ukwenziwa.
Uma wenza lo msebenzi uzothola iwindi elifana ncamashi nalelo esizolibeka ezansi.
Lokhu kuyinzuzo enkulu futhi kuyasiza, ngoba ithebhu ayikavalwa empeleni kepha, lokho ukubulawa kumiswe ngenkani. Ngale ndlela, i-URL yekhasi elithintekile isagcinwa, futhi ngakithi singasebenzisa inkinobho ephakathi ethi "Layisha Futhi" ukwenza ikhasi ebelinezinkinga phambilini lizame ukulayisha kabusha okuqukethwe kwalo.
Izinzuzo ze-Task Manager ku-Google Chrome
Uma uzama ukuthola okuhle kokusebenzisa lo msebenzi ku-Google Chrome, kufanele sisho ukuthi i-Task Manager yohlelo olusebenzayo ingasebenza inqobo nje uma ikhona. Ukukhuluma ngeWindows, kulolu hlelo lokusebenza uma lesi sici sikhona, isimo ongeke usithole kalula ku-Linux noma kwi-Mac, izindawo lapho ungasebenzisa khona le "Task Manager" ngqo kusuka kusiphequluli se-Google Chrome naku-Okay, kuya indlela esiyiphakamisile ngenhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Umphathi Womsebenzi ku-Chrome: Ubuwazi ukuthi ikhona?